English Myanmar English Coord meeting emphasizes development of energy and electrical sectors of State A coordination meeting on development of energy and electrical sectors of the State was held at the hall of the Ministry of Energy, Nay Pyi Taw , on 27 July ,2012 at 9:30 a.m. At the meeting, Union Minister for Energy U Than Htay, Union Minister for Electric Power No.1 U Zaw Min and Union Minister for Electric Power No.2 U Khin Maung Soe made speeches. More Information...
ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အာရှနိုင်ငံများ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှကုမ္ပဏီအမြောက်အများလာရောက်ဆွေးနွေးလျက်ရှိပါသည်။ ပြည်ပကုမ္ပဏီများနှင့် ကုန်းပိုင်းလုပ်ကွက်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ(၆၀)ကျော်မှ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသို့ လာ‌ရောက်ကမ်းလှမ်းထားပါသည်။ More Information...
ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းကြီးများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းကြီး ၂ ခု၊ မကြာမီ အကောင်အထည်ပေါ်လာတော့မည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းကြီး ၂ ခု နှင့် နောင်တွင်ပေါ်ပေါက်လာမည့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းကြီးတွေ အပေါ်တွင် ပြည်သူများအထင်အမြင်လွဲမှားမှုမဖြစ်စေရန် တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ကမ်းလွန်ဒေသ၊ လုပ်ကွက် အေ-၁ နှင့် အေ-၃ တွင် အကောင်အထည်ဖော် လျက်ရှိသော ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိလာသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပြည်သူများအတွက် သုံးစွဲနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေးဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ Shangri-La Hotel ၌ ၃၀-၅-၂၀၁၂ ရက်နေ့မှ ၁-၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သော အရှေ့အာရှဆိုင်ရာကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် (World Economic Forum on East Asia) သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
About MOE	Minister Office
Energy Sector In Myanmar
There are many Departments and Agencies under various Ministries, which share responsibilities on various aspects of energy sector's operation and management.
More Info...	Myanmar Foreign Investment Law
Myanmar Foreign Investment Law was promulgated on 30th November 1988, as The State Law and Order Restoration Council Law No. 10 / 88, in order to promote all round development of national economy.
More Info...	Regional Energy Corporation
1. BIMST-EC Energy Sector Cooperation
2. ASEAN Energy Sector Cooperation
More Info ...	Home
Myanmar, Known as Suvanna Bhumi (the Golden Earth) in the olden days for its fertile land and rich resources is the largest country in South-east Asia Peninsular sharing borders with Bangladesh, India, China, Laos and Thailand.
More Info ...	Our E-Services
E-services provided by Ministry of Energy to citizens and business. Our E-services is Online Tender, Online Application Form, Online Form Submission, Online Communication Channel between MOE and citizens. Read More ...	Main Menu
Home About MOEMinister OfficeEPDMOGEMPEMPPEInformationNewsAnnouncementArticleE-Services Contact Us Live Support Chat
We have 632 guests online	Contact Us
Nay Pyi Taw City, Myanmar
Web: www.energy.gov.mm	Popular Articles
Standard terms and conditions of productions sharing contract for Onshore
Standard terms and conditions of productions sharing contract for Offshore
ဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Standard terms and conditions of productions sharing contract for Deep Water Blocks
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၊ နေပြည်တော် (၃၀-၇-၂၀၁၄)
“Mixed LPG တင်ဆောင်လာသော သဘောင်္ရောက်ရှိ”
Copyright © 2014. Ministry of Energy.
HomeNewsAbout MyanmarUseful LinksSite Map